Ukukhulelwa iveki neveki - utshintsho kwimveku kunye nakumama | Oomama Namhlanje
Ukukhulelwa ngumzuzu womlingo kumfazi ofuna ukuba ngumama. Kuxa umzimba wakho uqala ukudala ubomi, xa indalo ikunika amandla okwenza into entsha esibelekweni sakho.. Ukukhulelwa kuthatha malunga neeveki ezingama-40 kwaye nangona nganye yahlukile kwelinye ibhinqa, Kubalulekile ukuba wazi ukuba kwenzeka ntoni kwikota nganye kunye neveki ngeveki ukufumanisa kungekuphela nje ukuba umzimba womfazi utshintsha njani, kodwa nokuba yintoni ukukhula kwe-umbungu, emva koko umbungu kwaye okokugqibela usana, olukhula kwisibeleko sikanina. .
Utshintsho lomama kunye nokuvela komntwana kubaluleke kakhulu, kukwabalulekile ukuthatha eminye imiba, njengokutshintsha kweemvakalelo okwenzeka ngenxa yomoya ovuthuzayo wamahomoni awathi umfazi wabandezeleka kwiinyanga ezilithoba ukukhulelwa.
Ke Uyakwazi ukwazi ukuba loluphi utshintsho emzimbeni womfazi, kwindaleko yosana oluzayo kunye notshintsho lweemvakalelo ekufuneka luthathelwe ingqalelo. Uyakuzazi iikota ezintathu kwaye, loluphi utshintsho olwenzekayo kwiiveki nganye ezenza ikota nganye.
Ikota yokuqala yokukhulelwa
Iinyanga ezintathu zokuqala zokukhulelwa ziqala kwiveki yokuqala (usuku lokuqala lwexesha lokugqibela) kude kube sekupheleni kweveki ye-13. Awunakubona ukuba ukhulelwe, nangona kwiiveki zokugqibela zale kota uza kuqala ukuyibona. . Kwezi veki uza kuqala ukuqaphela umkhukula wamahomoni oya kuthi ulungiselele umzimba wakho ubomi obutsha. Ungaqala ukuba nesicaphucaphu, ukugabha, ukudinwa, ukulala, kunye nezinye iimpawu emva kwiveki yesithandathu.
Ngethuba leenyanga ezintathu umntwana uya kutshintsha ekubeni siseli esichumileyo (i-zygote) esiya kuba sisibeleko esizifaka kudonga lwakho lwesibeleko. Iya kukhula ibe ngathi yipesika kwaye iinkqubo zayo zomzimba ziya kuqala ukusebenza. Amalungu aya kubunjwa kwaye umntwana uya kuqala ukuhamba.
Uya kuqaphela notshintsho kule krisimesi njengoko unokuziva unesiyezi kwaye ugabhe. Uya kuziva ukuba amabele akho athambile kwaye angonzakalisa kakhulu kwaye uya kuwaqaphela ukuba makhulu. Unokuqaphela ukutshintsha kwemood kunye nezinye iimpawu njengokukhulelwa kwakho inkqubela phambili enje: ukubola kwentliziyo, ukuqhina okanye urhudo, ukungathandi ukuvumba okanye ukuthanda, iintloko ...
Ininzi eyenzekayo kuwe kwikota yokuqala yokuqala, nayo. Ezinye zeempawu zokuqala zokukhulelwa onokuzifumana:
Iveki neveki yeTimester yokuqala yokukhulelwa
Ikota yesibini yokukhulelwa
Ikota yesibini yokumitha iqala kwiveki ye-14 yokukhulelwa kwaye iqhubeka de kube kuphela iveki ye-27. Le trimester yokukhulelwa yeyabafazi abaninzi abonwabileyo kwaba bathathu, kuba uninzi lwabasetyhini isicaphucaphu kunye nokungonwabi bayayeka bahambe. womelele ngakumbi ngexesha lekota yokuqala yokukhulelwa. Abafazi abakhulelweyo kule trimester baya kufumana utshintsho oluninzi. Into emangazayo malunga nayo kukuba ekupheleni kwale trimester ukukhulelwa kwakho kuya kuqatshelwa ngokupheleleyo.
Ngeli thuba leenyanga ezintathu umntwana wakho uya kube exakeke kakhulu ekukhuleni nasekukhuleni, kuya kusuka kwiveki ye-18 yokukhulelwa ukuba umntwana wakho abe nobunzima obufana nencum yenkuku, uya kuba nakho ukuzamla, uya kuba ne-hiccups, iminwe yakhe iya kwenziwa ngokupheleleyo . Ngeveki yama-21 uyakuqala ukuziva ukhaba okokuqala kwaye malunga neveki ye-23 omncinci wakho uya kuba lusana kwaye uya kuqala ukutyeba, kakhulu kangangokuba akwazi ukubuphinda kabini ubunzima bakhe kwiiveki ezi-4 ezizayo.
Ngethuba leenyanga ezintathu kuya kubakho iimpawu zokukhulelwa eziqhubekayo kuwe ezifana nokubetha kwentliziyo okanye ukuqhina. Ukongeza kwiimpawu osele uzazi kude kube ngoku, kunokubakho ezintsha kuba isisu sakho asiyeki ukukhula, kwaye iihomoni nazo aziyeki ukwanda. Ezinye zezi mpawu zinokuba kukuxinana kwempumlo, iintsini ezibuthathaka ngakumbi, ukudumba kweenyawo kunye namaqatha (nokuba kukuncinci), iinyanda zemilenze, isiyezi, ukungonwabi kwisisu esisezantsi kunye nemithambo ye-varicose.
Iveki neveki yeTimes yesibini yokukhulelwa
Ikota yesithathu yokukhulelwa
Ikota yesithathu iqala kwiveki yokukhulelwa engama-28 kwaye iphela malunga neveki yama-40. Oko kukuthi, ikota yesithathu yesithathu isusela kwinyanga yesixhenxe ukuya kwinyanga yethoba yokukhulelwa. Uya kuqala ukuqonda ukuba sikhulu kangakanani isisu sakho. Inxalenye ingaqala iiveki ezimbalwa ngaphambi okanye emva kweveki yama-40 yokukhulelwa (iipesenti ezingama-50 zeentsana zihlala zizalwa emva kweveki yama-40. Nangona xa iiveki ezingama-42 zokukhulelwa zifika, kuthathwa njengokugqityiwe ngokusemthethweni kwaye iya kuba ngumzuzu xa ugqirha ethatha isigqibo sokunyanzelisa abasebenzi ukuba ayiqali ngokwendalo.
Usana lwakho lukhulu kakhulu kunakwikota yesithathu, angalinganisa phakathi kweekhilogram ezimbini ukuya kwezine (okanye nangaphezulu kwezinye iimeko) xa ezalwa, uya kuba phakathi ko-48 no-55 cm xa ezalwa. Usana lukhula ngokukhawuleza kwaye oku kunokubangela ukuba uve ukukhatywa kabuhlungu kunye nokungonwabi emathunjini akho. Kwiveki ye-34 yokukhulelwa umntwana uzakulala ngesisu ukuze abe kwindawo yokuzalwa, Ngaphandle kokuba uhlale kwindawo yokuphola, into enokubangela ukuba ugqirha wakho acwangcise icandelo le-cearean ngaphambi komhla ofanelekileyo.
Kusenokwenzeka ukuba emzimbeni wakho uya kuqaphela imisebenzi emininzi, ngakumbi esiswini sakho uya kuqaphela imisebenzi emininzi yomntwana. Unokufumana utshintsho emzimbeni wakho ngenxa yokuba lukhulu kangakanani usana lwakho. Kusenokwenzeka ukuba uziva izinto ezinje: ukudinwa, iintlungu zemisipha kwaye ikakhulu iintlungu zesisu, isitshisa, iBraxton Hicks contractions, varicose veins, stretch marks, umqolo obuhlungu, i-sciatica, amaphupha acacileyo, ukungabinakho ukulawula isinyi, amabele avuzayo icolostrum, njl.
Iveki ngeveki yeThathu yeThathu yokuKhulelwa
Xa ixesha lokukhulelwa lifika kwikota kwaye umntwana wakho ezelwe, uya kuba nakho ukuhlangabezana nothando lobomi bakho kwaye uyakuqonda ukuba veki nganye uziva njani ngexesha lokukhulelwa, konke ukungonwabi kunyamezeleke kunye notshintsho obukade uhlangabezana nalo iinyanga ezilithoba zokumitha, bezikulungele oko.